Emume ncheta ubochi umu nwanyi
Daybọchị ụmụ nwanyị na 2021 dị na Machị 8th, Mọnde. 25 nke ọnwa mbụ nke ọnwa nke afọ nke Xin Chou (Afọ nke Ox). N'ụwa nile, ụbọchị asatọ nke ọnwa Machị, 1911, bụ ụbọchị izizi Internationalbọchị Ndị Inyom Mba Nile. China bidoro ime ncheta ubochi "March 8th" na 1922. Ya mere, ...
Kedụ ka m ga-esi atụ Bọọlụ Digger My Diming Dimensions?
site ha na 21-02-20
Fọdụ ndị na-azụ ahịa dị ka ndị ọrụ njedebe, ndị na-ere ahịa na ndị na-ekesa ya nwere ike ọ gaghị abụ ọkaibe na bọket na-egwupụta akụ. Ha aghaghi inwe ajuju ndi a dika “Etu aga esi choputa njiri ocha?”, “Kedu ihe kachasi mkpa maka bọket a na - egwu ala?”, “Kedu Bucket Na-adabara My Digger / Exc ...
Irè Atụmatụ to Longer Undercarriage Life
Ọtụtụ nlekọta na mmezi na ime ihe ga-eme ka uwe gabigara ókè na akụkụ ndị dị n'okpuru ime. Ma n'ihi na okpuru ala nwere ike ibu ihe ruru pasent 50 nke mmezi ihe eji arụ ọrụ igwe, ọ dị mkpa karịa idozi ma rụọ ọrụ igwe crawler. Site n'ịgbaso ...
Ndụmọdụ ndị a dị n'okpuru okpuru ga-ezere igba mgbatị dị oke ọnụ
Zọ okpuru nke akụrụngwa dị arọ, dị ka ndị na-egwu crawler, nwere ọtụtụ ihe na-agagharị agagharị nke a ga-edobe iji rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na anaghị arụ ọrụ nyocha ma na-echekwa ya, ọ nwere ike ibute ...
Etu esi arụ ọrụ Mini Excavator?
Ndị na-arụ ọrụ ngwa ngwa dị ka ndị na-egwupụta obere ihe dị ka ihe egwuregwu ụmụaka afọ ole na ole gara aga mgbe mbụ e webatara ha, mana ha enwetawo nsọpụrụ nke ndị ọrụ ngo ụlọ na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ saịtị na ịdị mfe nke ịrụ ọrụ, obere akara ụkwụ, ọnụ ala, ...
Ekele sitere na Bonovo Team
Ebe ọ bụ na oruru BONOVO toro nnọọ ngwa ngwa afọ site n'afọ, na anyị kwalite ụlọ ọrụ ọ bụla 2 afọ na nkezi. Ọzọkwa n'ichepụta ikike amụbawo kwa afọ. Ndi otu anyi kwenyesiri ike na BONOVO enweghi ike ito ngwa ngwa na ngwa ngwa n'enweghi nkwado nke ...
Akụkọ banyere BONOVO
Xuzhou BONOVO Machinery & Equipment Co., Ltd bụ ọkachamara ụlọ ọrụ tụnyere R & D, n'ichepụta na ahịa nke ewu ígwè na ngwaahịa. BONOVO headquarter office na factory dị na Xuzhou obodo - "nnukwu ewu ígwè isi" na Ch ...